amisulpride နှင့် reboxetine အောက်တွင်လှုံ့ဆော်မှုပြုခြင်း - ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုထိန်းချုပ်နိုင်သော fMRI လေ့လာမှု (၂၀၁၄) - Your Brain On Porn
amisulpride နှင့် reboxetine အောက်မှာခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့: ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled fMRI လေ့လာမှု (2014)
int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2014 အောက်တိုဘာ 31;၁၈ (၂) ။ pii: pyu18 Doi:2/ ijnp / pyu004 ။
Graf H ကို1, Wieger M2, Metzger စီဒီ2, Walter M က2, Grönဂျီ2, Abler ခ2.
ချို့ယွင်းသောလိင်မှုကိစ္စကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးကုသမှု၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်ပိုမိုအသိအမှတ်ပြုလာကြသည်။ သို့သော်လိင်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်၍ မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုး၏လုပ်ဆောင်ချက်၏အခြေခံယန္တရားများကိုလေ့လာရန်လိုနေသေးသည်။ အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ် serotonergic (paroxetine) နှင့် dopaminergic (bupropion) စိတ်ကျဆေးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းခဲ့သည် (Abler et al ။ , 2011) ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် noradrenergic နှင့် antidopaminergic ဆေးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုဘာသာရပ်အသစ်တစ်ခုတွင်လေ့လာခဲ့သည်။
noradrenergic agent reboxetine (24 mg / d), antidopaminergic agent amisulpride (3.1mg / d) နဲ့ subchronic စားသုံးမှုအောက်မှာ (၁၉) နှစ်ကျန်းမာတဲ့လိင်ကွဲအမျိုးသားများ (အသက် ၂၄ နှစ်၊ SD ၃.၁) ။ တည်ထောင်ထားသောခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သောဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုအတွင်းကျပန်း၊ မျက်စိကန်းသော၊ ရလဒ်များအရအိပ်ယာ - ထိန်းချုပ်မှု၊ အတွင်း - ဘာသာရပ်များအတွင်းသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ ပုဂ္ဂလိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုမက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံ - လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာမေးခွန်းလွှာကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်သည်။
ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်ဆက်စပ်သော, ပုဂ္ဂလဒိsexual္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ caudate နျူကလိယအတွင်းလျော့နည်းသွားအာရုံကြော activation နှင့်အတူ reboxetine အောက်မှာ attenuated ခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲနေသောအာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ amisulpride လက်အောက်တွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပုဂ္ဂလဒိsexual္လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုမပြောင်းလဲပါ။
မူလတန်းဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အခြေအနေတွင် caudate နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ofကိုယခင်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနှင့်အညီ, attenuated caudate activation noradrenergic အေးဂျင့်အောက်မှာခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်အပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
amisulpride; ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့; fMRI; ချို့ယွင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှု၊ reboxetine
ချို့ယွင်းသောလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုသည်လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့်ကုသမှုစနစ်ကိုလိုက်နာမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးကုသမှု၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် ပို၍ အသိအမှတ်ပြုခံရသည် (တေလာ et al ။ , 2005; ပန်းခြံ et al ။ , 2012; Baldwin et al ။ , 2013; la Torre et al ။ , 2013နောက်ခံယန္တရားများအတွက်ကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်စိတ်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း၏အဓိကလက္ခဏာဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ကြီးမားသောစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ပင်ကုသမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သက်ရောက်မှုများကိုထိခိုက်သောလူနာများအတွက်စုံစမ်းရန်ခက်ခဲသည် (Baldwin နှင့် Mayers, 2003ကျန်းမာသန်စွမ်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်))Graf ၏ et al ။ , 2014).
နဂိုအတိုင်းလိင်လုပ်ငန်းဆောင်တာသည် ဦး နှောက်နှင့်ကျောရိုးစင်တာများ၏ရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုများအပြင်ဟော်မုန်း၊ အရံနှင့်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအခြေခံသည်။ ကွဲပြားခြားနားသော neurotransmitters နှင့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအခြေခံမူများ၏ဤအပြန်အလှန်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြီးအကျယ်မသိရသေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များတွင်လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများကို subhronic ကုသမှုအောက်တွင်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကို အသုံးပြု၍ (၇ ရက်) ဆန်းစစ်ထားပြီးဖြစ်သော serotonin reuptake inhibitor (SSRI), paroxetine နှင့် bopropion၊ dopamine နှင့် noradrenaline တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ NA) reuptake- inhibitor ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SSRI လက်အောက်ရှိပုဂ္ဂလိကချို့ယွင်းမှုရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုခြေလက်အင်္ဂါနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်withinရိယာအတွင်းရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါကြောင်းပြသခဲ့သည်။Abler et al ။ , 2011), orbitofrontal cortex နှင့် ventral striatum အကြားတိုးမြှင့်အပြန်အလှန် interaction ကမှအလားအလာဆက်စပ် (Abler et al ။ , 2012) ။ လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း (Coleman et al ။ , 2001; တေလာ et al ။ , 2013), ချို့ယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပင်အဓိကနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ sublenticular တိုးချဲ့ amygdala) နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဒေသများရှိပင်တိုးပွားလာအာရုံကြော activation မှ ဦး ဆောင်သော bupropion အောက်မှာထင်ရှားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ SSRI နှင့် dopamine နှင့် NA ၏ပြန်လည်ဆုပ်ကိုင် - တားစီးကုသမှု၏ဤဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းအတွက်ပြသသော်လည်း၊ fronto-parietal နှင့် cingulo-opercular အာရုံစူးစိုက်မှုကွန်ယက်များအတွင်း bupropion နှင့် paroxetine နှစ်ခုစလုံးအတွက်သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားခြင်းသည် erotic picture stimuli မီGraf ၏ et al ။ , 2013) ။ ထို့ကြောင့် serotonergic နှင့် noradrenergic / dopaminergic ဆေးများသည်လေ့လာခဲ့သော erotic stimulus အပြောင်းအလဲ၏ရှုထောင့်ပေါ်မူတည်။ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ညီညွတ်သောသက်ရောက်မှုများကိုပြသခဲ့သည်။ ယခင်ယူဆချက်များနှင့်အညီ (Pessiglione et al ။ , 2006), bupropion ၏ dopaminergic အစိတ်အပိုင်းတိုက်ရိုက်အမြင်အာရုံ erotic နှိုးဆွအပေါ်သို့တိုးမြှင့် activation များအတွက်တာဝန်ရှိကျင်းပခဲ့သည်Abler et al ။ , 2011), နှင့် noradrenergic အစိတ်အပိုင်းခေါ်ဆောင်သွားဆွ၏မျှော်လင့်ချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေဖို့အနက်ခဲ့သည် (Graf ၏ et al ။ , 2013) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုဘာသာရပ်အသစ်များဖြင့်ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် monoaminergic ဆေးများ၏အာရုံကြောသက်ရောက်မှုများကိုထပ်မံခွဲထုတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ယခုတွင် noradrenergic နှင့် antidopaminergic ဆေးများကိုရွေးချယ်အသုံးပြုသည်။
Rebadetaline သည် noradrenalin ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုကိုတားဆီးပေးသော (ndri) သည် reboxetine သည်အလွန်စိတ်ချရသောဆေးဖြစ်သည်။ noradrenalin transporter နှင့် serotonin transporter၊ monoamine, histamine နှင့် acetylcholine receptors များနှင့်ထိတွေ့မှုနည်းပါးသည်။Hajos et al ။ , 2004) ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏အာရုံကြောဆက်နွယ်မှုများအပေါ်တွင် NA ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်သင့်တော်သောမော်တော်ယာဉ်ကိုတင်ပြသည်။ လူနာများတွင် reboxetine ၏လိင်အင်္ဂါလည်ပတ်မှု၏အချို့သောရှုထောင့်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။Clayton et al ။ , 2003b) SSRI နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နည်းသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် (ဝီစကီနှင့်တေလာ, 2013) အထူးသဖြင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှု၊Baldwin et al ။ , 2006) နှင့်အော်ဂဇင်ရရှိ (Langworth et al ။ , 2006) ။ သို့သော်ဖြစ်ပွားမှုအစီရင်ခံစာများနှင့်အညီ (O'Flynn နှင့် Michael, 2000; Haberfellner၊ ၂၀၀၂; Sivrioglu et al ။ , 2007), ထုတ်ကုန်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတင်းအချက်အလက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌မြင့်မားသော / နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်နာကျင်သုတ်ရည်လွှတ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လေ့တိုးလာအန္တရာယ်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးညွှန်းအောက်မှာထိုကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏တိုးမြှင့်မှုနှင့်အတူတိုးမြှင့်စွန့်စားမှုသတင်းပို့သည်။ လူနာများ (Tanum၊ ၂၀၀၀).
အဆိုပါ atypical antipsychotic မူးယစ်ဆေး amisulpride postsynaptic: D မှမြင့်မားခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်2 နဲ့ D3 receptors (Perrault et al ။ , 1997; Castelli et al ။ , 2001; Hartter et al ။ , 2003) ။ antipsychotics အောက်ရှိလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရှင်းပြရန်အသုံးအများဆုံးယူဆချက်ကိုကြည့်ပါ la Torre et al ။ , 2013 ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်) dopamine D ကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်သည်2 receptors (Haddad နှင့် Sharma က, 2007prolactin အဆင့်ဆင့်၏ဒုတိယတိုးနှင့်အတူ tuberoinfundibular လမ်းကြောင်း၌) (ပန်းခြံ et al ။ , 2012) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်ဒီတိကျတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးအောက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွ၏ dopaminergic အာရုံကြောဆက်စပ်မှု၏ activation လျော့နည်းသွားမျှော်လင့်ထား။
ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များတွင် noradrenergic (reboxetine) နှင့် antidopaminergic (amisulpride) ဆေးဝါးများအောက်ရှိလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအပြောင်းအလဲ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် serotonergic နှင့် dopaminergic အခြေခံမူ၏အာရုံကြောသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်စုံစမ်းမှုများမှရလဒ်များကိုဖြည့်စွက်ရန်ရည်ရွယ်သည် (Abler et al ။ , 2011) နှင့်ကျန်းမာသောအထီးနမူနာအသစ်တစ်ခုအတွင်း၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်၍ monoaminergic ယန္တရားများအားထပ်မံသွင်ပြင်လက္ခဏာများပေးရန်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ကျန်းမာရေး၊ လိင်ကွဲ၊ ယောက်ျား၊ လက်ယာဘာသာရပ် ၂ ဝကို amisulpride (AMS), reboxetine (REB) နှင့် placebo (PLA) တို့ဖြင့် subchronic ဆေးဝါးအောက်မှာကျပန်းတွက်ချက်ထားပါတယ်။ ဦး နှောက်ရောဂါဗေဒ (gliotic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်) ကြောင့်နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဘာသာရပ် ၁ ခုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့် ၁၉ ဦး ပါ ၀ င်သောတက်ရောက်သူများနမူနာ (အသက် ၂၄.၀ နှစ်၊ SD ၃.၁ ၃၊ အကွာအဝေး ၂၀-၃၂ ကိုဆိုလိုသည်) ။ သင်တန်းသားများကိုကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ် Ulm တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းဝင်း၌ရေးသားထားသောကြော်ငြာများဖြင့်စုဆောင်းခဲ့သည်။ လေ့လာမှုမစတင်မီပါ ၀ င်သူတစ် ဦး စီသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုနှင့် DSM-IV ဝင်ရိုး ၁ စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာလူတွေ့မေးမြန်းခြင်းအပါအ ၀ င်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုအပြည့်အစုံကိုရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်စိတ်ရောဂါရောဂါရှိသူများကိုလေ့လာမှုသမား (HG or BA) မှတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်သောမေးခွန်းများနှင့်အတူ DSM-IV Axis I Psychiatric Disorders module များတွင်“ လက်ရှိ” သို့မဟုတ်“ subthreshold” ဟုသတ်မှတ်ထားသောလက္ခဏာများနှင့်အတူစိတ်ရောဂါရှာဖွေရေးတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြပေသည်။ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းရောဂါသို့မဟုတ်နှလုံးရောဂါဗေဒကိုဖယ်ထုတ်ရန်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်သွေးစစ်ဆေးမှုနှင့်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထပ်မံ၍ ဖယ်ထုတ်ခြင်းစံများမှာယေဘူယျအားဖြင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ လက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်မှအာရုံကြောရောဂါ၊ သက်ဆိုင်ရာအခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာရောဂါများ၊ စုဆောင်းမှုအပြီးတွင်အခြေခံစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုဂျာမန်ဘာသာဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့သည် (Hautzinger နှင့် Bailer, 1993ကူးစက်ရောဂါလေ့လာရေးစိတ်ကျရောဂါစကေး၏စင်တာ ()Radloff, 1977) ။ မက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံ၏လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာမေးခွန်းလွှာ (MGH-SFQ; Labbate နှင့် Lare, 2001) လေ့လာမှုမတိုင်မီအခြေခံလိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၊ လိင်မှုနှိုးဆွမှု၊ အော်ဂဇင်အောင်မြင်နိုင်စွမ်း၊ စိုက်ထူမှုရရှိရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်စွမ်းရည်နှင့်ယေဘုယျလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုတို့ကိုအကဲဖြတ်ရန်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရမေးခွန်းပုံစံသည်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှသာပုဂ္ဂလဓိfunctioning္ဌာန်လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပြောင်းအလဲများကိုအကဲဖြတ်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည် (Abler et al ။ , 2011) ။ ထည့်သွင်းပြီးပါကဘာသာရပ်များသည်ဤသတ်သတ်မှတ်မှတ်မေးခွန်းလွှာ (၁၀.၇) တွင်ဖော်ပြထားသောစုစုပေါင်းရမှတ်များ (10; SD 10.7 ကိုဆိုလိုသည်) ဖြင့်တင်ပြထားသည်။
လေ့လာမှုကို Ulm တက္ကသိုလ်မှဒေသခံကျင့်ဝတ်ရေးရာကော်မတီမှအတည်ပြုပြီးပါ ၀ င်သူများအားလုံးသည်ဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက်နှင့်အညီစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးချက်ကိုပေးခဲ့သည်။
ကျပန်း, မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled, အတွင်း - ဘာသာရပ် crossover ဒီဇိုင်းအတွင်း, ဘာသာရပ်များ 200 ရက်အသီးအသီးအဘို့အ 100mg AMS (တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် 4mg), 2mg REB (တစ်နေ့လျှင် 7mg) နှင့် PLA (တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်), အနည်းဆုံး2ပတ်၏တစ် ဦး ဆေး - ထွက်အဆင့်အားဖြင့်ကွဲကွာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှု protocol ကိုကဲ့သို့ (Abler et al ။ , 2011), ဒီအသစ်သောဘာသာရပ်များနမူနာ3ကြိမ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခံခဲ့ရသည်နှင့် fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုနောက်ဆုံးဆေးတောင့်ပြီးနောက်2နာရီ, ဆေး၏သတ္တမနေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် fMRI မတိုင်မီ ၃ ရက်အလိုတွင်ဆေးသောက်ခြင်းနှင့်အပြိုင်အရက်ကိုရှောင်ပါ။ သူတို့ကစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု၏နေ့၌ကော်ဖီမှရှောင်ကြဉ်ရန်လည်းတောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုနှင့်လိုက်နာမှုကိုအာမခံရန်သွေးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြီးတိုင်း (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီးနောက် ၃ နာရီခန့်အကြာ) တွင်သွေးနမူနာများကိုလေ့လာခဲ့ပြီးလေ့လာမှုတစ်ခုလုံးပြီးဆုံးသွားသည်။ ပျမ်းမျှပလာစမာ amisulpride အဆင့်သည် 3ng / mL (SD 3)၊ ပလာစမာ Reboxetine level 137.7ng / mL (SD 54.8) ဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ဘာသာရပ် ၁၉ ခုအနက်တစ်ခုစီတွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအတာအတွင်းသွေးပမာဏကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာစားခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးနောက် MGH-SFQ ကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ MGH-SFQ တွင်မေးခွန်း ၅ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၁ မှ ၆ အထိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ၅ ခုမှ (အနည်းဆုံးတန်ဖိုး - လိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတိုးတက်ခြင်း) ၁၀ ခုထက်ကျော်လွန်ခြင်း (လိင်မှုကိစ္စပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ၃၀ အထိ (အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး - လိင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသိသိသာသာအားနည်းခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) ပုံမှန်နှင့်အတူ) ။ တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းများသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းရမှတ်အတွက် <၂ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ၁၀ ဘာသာရေးအားဖြင့်ချို့ယွင်းမှုရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသည် (အသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ။ ) Labbate et al ။ , 2001; Abler et al ။ , 2011) ။ ဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလေ့လာမှုပြုလုပ်သောဆရာဝန်များ (HG or BA) မှဖွင့်လှစ်သောမေးခွန်းများနှင့်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောအပိုင်း (UKU ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ) ဖြင့်ဆေးကုသမှုတစ်ခုအတွင်းအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ Lingjaerde et al ။ , 1987တစ်ခုချင်းစီကို session တစ်ခုအပေါ်) ။ ဆေး၏သက်ရောက်မှုကို Stanford Sleepiness Scale (SSS; Hodes et al ။ , 1973) ။ ကှဲလှဲ၏ထပ်ခါတလဲလဲ - အစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (ANOVA) နှင့် Post-hoc Newman Keuls စမ်းသပ်မှုမေးခွန်းလွှာရလဒ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်စမ်းသပ်မှုကဲ့သို့ပင်စံပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်းတစ်ခုအတွင်းကြာရှည်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်ကြားနေဗီဒီယိုကလစ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။Abler et al ။ , 2011) ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွသောဗီဒီယိုကလစ်များကိုစီးပွားဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်ကားများမှထုတ်ယူခဲ့ပြီးအမျိုးသား ၁ မှ ၂ အမျိုးသမီးကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ပါးစပ်၊ လိင်အင်္ဂါနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှု) ကိုဖော်ထုတ်သည်။ ကြားနေဗီဒီယိုကလစ်များသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားနေမှု၊ အရောင်အသွေးနှင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများကိုအရောင်၊ အပြန်အလှန်ပြုသည့်ဘာသာရပ်အရေအတွက်နှင့်ကျားမခွဲခြားမှု၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပုံဖော်ထားသည့်ဘာသာရပ်များကိုဝတ်ဆင်ခြင်း၊ အခြေအနေ (၂) ခုစီမှဗီဒီယိုကလစ် (၉) ခုစီကို (၂၀) ​​စက္ကန့်စီစီပြသခဲ့ပြီး (၂၀) ​​စက္ကန့် fixation ကာလဖြင့်ကွဲကွာသွားပြီးစုစုပေါင်းပါရာဒိုင်းအရှည် (၇၂၀) စက္ကန့်ရှိသည်။ ဗီဒီယိုကလစ်များသည်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဗွီဒီယိုမျက်မှန်များတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းတို့ကိုအများဆုံးတူညီသောအခြေအနေ ၂ ခုဆက်တိုက်ကလစ်များဖြင့် Pseudo-randomized order ဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များနှင့်ဆေးဝါးများအကြားတူညီသောဗီဒီယိုအပိုင်းအစများ၏အစဉ်အလာကိုထိန်းညှိထားသည်။
T1 ခန္ဓာဗေဒအသံအတိုးအကျယ်ပုံရိပ်များ (1x1x1-mm voxels) နှင့်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုရုပ်ပုံများကို 3T ဦး ခေါင်းတစ်ခုတည်းသောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်စနစ် (Siemens Magnetom Allegra, Erlangen, Germany) ကို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ရုပ်ပုံအရွယ်အစား ၆၄ × ၆၄ ပစ်ဇယ်နှင့် ၁၉၂ မီလီမီတာမြင်ကွင်းအကွာအဝေးရှိအပြန်အလှန်ချပ် ၂၂ ခုကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ အချပ်အထူသည် ၀.၇၅ မီလီမီတာကွာဟမှုနှင့်အတူ ၃ မီလီမီတာအရွယ်ရှိ voxel အရွယ်အစားကို ၃x၃ x ၃၃.၃ မီလီမီတာရှိသည်။
အချပ်သည် subcortical အကျိုးစီးပွားဒေသများ (amygdala, Basal ganglia နှင့်ယုတ်ညံ့ prefrontal ဒေသများ) အပါအ ၀ င် ဦး နှောက်၏ Basal တည်ဆောက်ပုံများတွင်ဖြစ်ပေါ်လွယ်လွယ်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် transversal နှင့် coronal လေယာဉ်များအကြား -15 °၏ထောင့်ချိုးတွင် bicommissural လိုင်းထက်ပိုမိုမတ်စောက်သည်။ ၁.၅ စက္ကန့်ကြာသောတိုတောင်းသောအချိန် (TR) ၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်အချပ်အရေအတွက်လျှော့ချခြင်းကြောင့် ဦး နှောက်လွှမ်းခြုံမှုလုံးဝမရှိပါ။ Functional ပုံရိပ်များ T1.5 * -sensitive gradient ကိုပဲ့တင်သံပဲ့တင်သံ - အပြာရောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတိုင်းတာခြင်းပဲ့တင်သံ - ပြိုပုံရိပ်သုံးပြီးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ TR မီလီစက္ကန့် (TE2milliseconds, flip angle 487 °) တွင်ဗီဒီယိုကလစ်များကြည့်ရှုစဉ်စုစုပေါင်းအတွဲ ၄၈၇ ခုရရှိခဲ့သည်။ ပထမပုံ ၇ ခုသည် T1500 saturation effect အတွက်ခွင့်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လွှင့်ပစ်ခဲ့သည်။ အစဉ်လိုက်တစ်ခုစီ၏အစတွင်ပုံရိပ်ရယူခြင်းနှစ်ခုနှင့် disk ထဲသို့မသိမ်းဆည်းရသေး T35 equilibration time (90 စက္ကန့်) ကိုပေါင်းထည့်သည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု၏အဆုံးမှာမြင့်မားသော resolution ကို T7-weighted ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံကို magnetization ဖြင့်စီမံခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ အမြန်ရယူခြင်း gradient echo sequence (TR = 1 milliseconds, TE = 1 milliseconds, inversion time =3milliseconds, flip angle = 1 °, FoV) = 2300mm, matrix ကိုအရွယ်အစား: 3.93 x ကို 1100, voxel အသံအတိုးအကျယ် = 12mm3, အချပ် orientation ကို: sagittal; = 517 စက္ကန့်) အချိန် scan ဖတ်။
ရုပ်ပုံများကိုကြိုတင်စီမံခြင်းနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများကိုစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ Parametric Mapping (Wellcome Department, London, UK) ကို အသုံးပြု၍ အုပ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများအတွက်ကျပန်းသက်ရောက်မှုပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကဏ္ each တစ်ခုချင်းစီမှအချက်အလက်များကိုအချပ်အချိန် - အချိန်၊ ပြန်လည်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ပုံမှန် - စံပုံစံ (Montreal Neurological Institute) သို့ spxial resolution ဖြင့် 2x2x2mm ပါဝင်သည်။3။ ချောမွေ့မှုကို ၈ မီလီမီတာ FWHM isotropic Gaussian kernel ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ intrinsic autocorrelations ကို AR (8) မှမှတ်ယူပြီး high-pass filtering ဖြင့်ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ပျံ့ခြင်းကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
အလားတူ Abler et al ။ (၂၀၁၁)ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်ကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဘာသာရပ်များအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျ linear မော်ဒယ်အရကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစား ၂ ခု (erotic, nonerotic) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် regressors ၂ ခုကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုလုပ်ကွက်များသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီတိုးချဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်များအဖြစ်စက္ကန့် ၂၀ ကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး hemodynamic response function နှင့်ပါ ၀ င်သည်။ ကျန်နေတဲ့ရွေ့လျားမှုမော်ဒယ်2realignment parameters တွေကိုလည်းတစ် ဦး ချင်းစီမော်ဒယ်များတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုမှမည်သည့် ဦး တည်ချက်သို့မဟုတ်အဆက်မပြတ် volumes များအကြား>2ဒီဂရီလှည့်ပတ် 20mm သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောလှုပ်ရှားမှုမပါရှိပါ။ erotic နှင့် nonerotic အခြေအနေများအတွက်တစ် ဦး ချင်းဆန့်ကျင်ဘက်ပုံရိပ်များထို့နောက်ပထမ ဦး ဆုံးအချက်အဖြစ်အခွအေနေ (erotic / nonerotic) နဲ့ ANOVA မော်ဒယ်ကိုအသုံးပြု။ ဒုတိယအဆင့်အုပ်စုတစ်စုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကုသမှု (PLA / AMS / REB) ကိုဒုတိယအဆင့်အဖြစ်ဒုတိယအဆင့်အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးအဆင့်သုံးဆင့်နှင့် nonerotic လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အပေါ်ကုသမှု၏သိသာသောအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ကတတိယအချက်ဘာသာရပ် -related ကှဲလှဲလုပ်ပါတယ်။
ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို 1-tailed အခွအေနေ -by- ကုသမှု interaction ကကွန်ပျူတာအားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 1 တက်ကြွသောဒြပ်ပေါင်းများနှင့် 1 ရလဒ်များအရအိပ်ယာ vs 1 တက်ကြွသောအခွအေနေနှင့် 1 ထိန်းချုပ်မှုအခွအေနေ (erotic, nonerotic; ရလဒ်များအရအိပ်ယာ, verum) အတွက်အကောင့်မှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ t-contrasts ၏တစ်ဖက်သတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်စာရင်းအင်းတံခါးခုံ၌သက်ရောက်မှုများကိုသိသာထင်ရှားစေသည် P<0.0025, voxel အဆင့်မှာမပြင်ဆင်နှင့်အနည်းဆုံး 419 ၏အဆငျ့သိသိသာသာသိသိသာသာ voxels ၏စပျစ်သီးပြွတ်အတိုင်းအတာ၏ P<0.05, familywise အမှား (FWE) သည်စပျစ်သီးပြွတ်အဆင့်တွင်တည့်မတ်ခဲ့သည်
fMRI ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ပုဂ္ဂလိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် MHG-SFQ အမျိုးအစားခွဲ ၅ ခုစီကိုသိသာထင်ရှားသည့်အခြေအနေဖြင့်ကုသမှုမျက်နှာဖုံးအတွင်းထည့်သွင်းထားသည့်အမျိုးမျိုးသောဆုတ်ယုတ်မှုဆန်းစစ်မှုကိုထပ်မံတွက်ချက်သည်။ အဆိုပါမှီခို variable တွေကို reboxetine ဆန့်ကျင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာခြားနားခြင်းမှအခွအေနေ -by- ကုသမှုအပြန်အလှန်၏တစ် ဦး ချင်းစီ parameter သည်ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ subscales5အသီးအသီးအဘို့ Regressors တစ် ဦး ချင်းစီ၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့် reboxetine အကြားခြားနားချက်ရမှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထူးခြားသောဆုတ်ယုတ်မှုသက်ရောက်မှုများကိုစမ်းသပ်ရန်တ ဦး တည်းအမြီးတီထွင်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုအဆင့်မှာသိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည် P<0.0025 voxel အဆင့်နှင့်အနည်းဆုံး 16 ဆက်တိုက်သိသာထင်ရှားသော In-mask voxels ၏စပျစ်သီးပြွတ်အတိုင်းအတာနှင့်အဆင့်တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည် P<0.05, FWE သည်စပျစ်သီးပြွတ်အဆင့်တွင်တည့်မတ်ခဲ့သည်။
ပျမ်းမျှကူးစက်ရောဂါလေ့လာမှုစိတ်ကျရောဂါစကေး 8.0 ၏စုစုပေါင်းရမှတ် (SD ကို 6.04) အတွက်သင်တန်းသားများကိုအတွက်သက်ဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေညွှန်ပြ။
UKU ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတိုင်းအတာအရဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်အောက်ပါပြောင်းလဲမှုများအတွက်မပေါ်ခဲ့ပါ။ အိပ်ချိန်ကြာချိန်၊ အိပ်စက်ခြင်းလှုပ်ရှားမှု၊ dystonia၊ မာကျောမှု၊ hypokinesia / akinesia၊ hyperkinesia ယုတ္တိဗေဒ၊ တုန်ခါ၊ akathisia၊ epileptic တက်ခြင်း၊ ၀ မ်းပျက် ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ ပုံမမှန်သည့်အနှောင့်အယှက်များ၊ polyuria / polydipsia၊ orthostatic မူးဝြေခင်း၊ ရင်ခုန်ခြင်း / tachycardia၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ အဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း၊ pruritus၊ photosensitivity၊ အရောင်ခြယ်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုအနည်းဆုံးဖော်ပြချက်တစ်ခုမှာအောက်ပါပစ္စည်းများအတွက်ဖြစ်သည် - ကုသမှုအကြားတွင်ကွဲပြားမှုမှာထူးခြားမှုမရှိပါ - အာရုံစူးစိုက်မှုအခက်အခဲ (F (2,36) = 0.55; P= 0.582), asthenia / lassitude / တိုးမြှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် (F (2,36) = 2.15; P= 0.131), အိပ် / သက်သာစေသောဆေး (F (2,36) = 1.61; P= 0.214), မှတ်ဉာဏ်ပျက်ကွက် (F (2,36) = 1.00; P= 0.378), စိတ်ကျရောဂါ (F (2,36) = 1.31; P= 0.283), စိတ်ခံစားမှုလျစ်လျူ (F (2,36) = 1.18; P= 0.320), နေရာထိုင်ခင်းနှောင့်အယှက် (F (2,36) = 0.19; P= 0.827), ပျို့ / အန် (F (2,36) = 0.24; P= 0.788), ချုပ် (F2,36) = 0.08; P= 0.924) နှင့် (တင်းမာမှု) ခေါင်းကိုက်ခြင်း (F2,36) = 0.12; P= 0.888) ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (၃) ခုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကုသမှုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများရှိခဲ့သည်။ လျှော့ချတံတွေး (F (3) = 2,36; P= 0.017), အတွင်းမငြိမ်သက်မှု (F (2,36) = 3.71; P= 0.034) နှင့်အိပ်စက်ခြင်း၏ကြာချိန် (F (2,36) = 6.87; လျှော့ချ; P= 0.003) ။ Post-hoc စမ်းသပ်ခြင်းသည် reboxetine (REB) အောက်တွင်တံတွေးအရိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတံတွေးသည်ယိုယွင်းလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။P= 0.033) နှင့် amisulpride (P= 0.013), amisulpride (AMS) ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်မတူခဲ့ပါဘူး (P> 0.05) ။ AMS နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် REB လက်အောက်တွင်အတွင်းမတည်ငြိမ်မှုများပိုမိုထင်ရှားသည် (P= 0.032) ဒါပေမယ့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (P= 0.067); နောက်တဖန် AMS နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကွဲပြားခြားနားခဲ့ (P> 0.05) ။ REB အောက်တွင်အိပ်ချိန်ကြာချိန်အိပ်စက်ခြင်းကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် (P= 0.006) နှင့် AMS (P= 0.004), အိပ်ချိန်၏ကြာချိန်ရလဒ်များအရအိပ်ယာမှ AMS ဆွေမျိုးအောက်မှာသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် (P> 0.05) ။ ဤအခြေအနေတွင်ထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရန် ANOVA သည် fMRI စစ်ဆေးပြီးနောက်ချက်ချင်းသက်သာခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်ချင်ခြင်းအပေါ်သိသာသောကုသမှုသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (SSS; F (2,36) = 1.47; P= 0.244; အသေးစိတ်ကိုဇယား S1 တွင်ကြည့်ပါ။
ကျောင်းအပ်နှံပြီးနောက် MHG-SFQ တွင်စုစုပေါင်းရမှတ်မှာ ၁၀.၇ (SD 10.7) နှင့် ၁၁.၇ (SD 1.70) ဖြစ်သည်။ တွဲဖက်သည့် t-testing သည်ရလဒ်များအရအိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်ကျောင်းအပ်သည့်ရမှတ်များအကြားသိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ P= 0.138) နှင့် MGH-SFQ- ဒေတာကျောင်းအပ်အပေါ်သို့ထပ်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး။ MHG-SFQ အတွင်းရှိရမှတ်များအပေါ်ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာသိသာထင်ရှားသည် (F (2,36) = 8.10; P= 0.001) ။ Post-hoc စစ်ဆေးမှုများ (Newman Keuls) က SNRI reboxetine အောက်တွင်လိင်မှုကိစ္စပိုမိုအားနည်းစေကြောင်း၊P= 0.002) နှင့် amisulpride (P= 0.003) ။ Antidopaminergic မူးယစ်ဆေး amisulpride အောက်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်မတူပါ။P= 0.850) ။ ကွဲပြားခြားနားသော subscales စဉ်းစား (စားပွဲတင် 1), reboxetine လိင်စိတ်နှိုးဆွ, အော်ဂဇင်နှင့်တစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန် / ထိန်းသိမ်းရန်နိုင်စွမ်းများအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ် amisulpride ဖြစ်စေဆွေမျိုးထိခိုက်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ reboxetine နှင့် amisulpride ဆွေမျိုးများအနေဖြင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်ကြောင်း၊ amisulpride နှင့် placebo အကြားနှိုင်းယှဉ်မှုများသည် subscales များ၌သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုများမတွေ့ရှိခဲ့ပါ (ပုံ 1A-B) ။
MOVH-SFQ ၏ Subscale တစ်ခုစီအတွက်အုပ်စုလိုက်ပျမ်းမျှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်“ ကုသမှု” (Reboxetine / Amisulpride / Placebo) နှင့်အတူ ANOVA မှရလဒ်များ။
A, မက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံ၏လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာမေးခွန်းလွှာ (MGH-SFQ) မှစုစုပေါင်းရမှတ်များ (SD) ကိုဆိုလိုသည်။ ခြုံကြည့်လျှင်၊P<0.05) ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့် amisulpride နှိုင်းယှဉ် reboxetine အောက်မှာချို့ယွင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ...
ယခင်ရလဒ်များကိုပုံတူကူးခြင်း (Abler et al ။ , 2011), လက်ရှိနမူနာအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (ခေါ်ဆောင်သွားအနုတ် nonerotic ဗီဒီယိုကလစ်များ) အောက်မှာခေါ်ဆောင်သွားအမြင်အာရုံဆွ၏အဓိကသက်ရောက်မှုကိုသိသိသာသာပြသခဲ့သည် (P<0.05 FWE စပျစ်သီးပြွတ်အဆင့်ကိုတညျ့) သာလွန်ခြင်းနှင့်ယုတ်ညံ့ယာယီ gyrus, အလယ်အလတ် occipital gyrus, ယုတ်ညံ့ parietal lobule, ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus, precentral gyrus, insula, hippocampus, midbrain (အသိသိသာသာ nigra ၏အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်) တွင်အာရုံကြော activations တိုးမြှင့်ခဲ့သည် caudate နျူကလိယ။
လက်ျာ caudate နျူကလိယနှင့်လက်ျာ anterior putamen နှင့် lentiforme နျူကလိယ၏အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သောစပျစ်သီးပြွတ်အဘို့အသိသာထင်ရှားသောအခြေအနေဖြင့်ကုသမှုဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Post-hoc စစ်ဆေးမှုများသည်ဤသက်ရောက်မှုများသည် reboxetine အောက်ရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာတက်ကြွမှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ စားပွဲတင် 2; ပုံ 2A-B) ။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုပြန်ဆန့်ကျင် Reboxetine အောက်ရှိအာရုံကြောများတိုးမြှင့်ခြင်းကိုစမ်းသပ်ခြင်းသည်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ထို့အပြင် amisulpride နှင့် reboxetine ဆန့်ကျင် amisulpride ဆန့်ကျင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါသိသိသာသာရလဒ်များကိုတစ် ဦး ထက်ပိုနူးညံ့စာရင်းအင်းတံခါးခုံမှာရရှိနိုင်ကြသည်မဟုတ် P<0.025 နှင့်စပျစ်သီးပြွတ်ပြင်ဆင်ချက်မပါဘဲ။
Erotic အနုတ်လက္ခဏာမတိုက်ဆိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ခြားနားချက်အတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအနုပညာ Reboxetine (ANOVA; P <0.0025, Voxel အဆင့်တွင်ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အနည်းဆုံး 419 တွင်ကျယ်ပြန့်သောစပျစ်သီးပြွတ်ပမာဏ ...
အထွတ်အထိပ် voxel ရှိ sagittal နှင့် transversal ချပ်များတွင်ဖော်ပြထားသောညာဘက် caudate နျူကလိယအတွင်း၌အဓိကအားဖြင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -by-reboxetine အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (P<0.0025, voxel အဆင့်မှာတညျ့နှင့်အနည်းဆုံး 419 တသမတ်တည်းသိသိသာသာ၏စပျစ်သီးပြွတ်အတိုင်းအတာမှာ ...
SNRI reboxetine အောက်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော fMRI activations ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်မပျော်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုတွက်ချက်သည်။ ကျနော်တို့လက်ျာ caudate နျူကလိယ (ဆိုလိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုကိန်း) ၏ ventral အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွင်းသိသိသာသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် r= 0.709, P = 0.05 FWE စပျစ်သီးပြွတ်အဆင့်မှာတညျ့; voxels အရေအတွက်: 22; အထွတ်အထိပ် Z- တန်ဖိုးကို: 3.10; x, y, z = 10, 22, 4) MGH-SFQ အဆင့်ခွဲ“ လိင်စိတ်ကုသမှု” နှင့်အတူအာရုံကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်အတူလိင်စိတ်စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ပုံ 3) ။ အခြား MGH-SFQ subscales အဘယ်သူမျှမ fMRI activation ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အတူသိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်း။
သိသိသာသာရလဒ်များအရအိပ်ယာ -by-reboxetine အပြန်အလှန်နှင့်အတူ voxels ပါဝင်သောမျက်နှာဖုံးအတွင်း regressors အဖြစ် fMRI အချက်အလက်များ၏ MGH-SFQ subscales ၏မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များ (အမှန်တကယ်စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား: 565) ။ သိသာသောဆက်စပ်မှု (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုကိုဆိုလို။ ) ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတိုးချဲ့ (Abler et al ။ , 2011serotonergic နှင့် dopaminergic ဆေးဝါးများအောက်တွင်လိင်မှုနှိုးဆွပေးသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများအပေါ်၊ ယခုလေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် noradrenergic နှင့် antidopaminergic ဆေးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဘာသာရပ်သစ်တစ်ခု၏နမူနာတွင်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ double-blind, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled, crossover ဒီဇိုင်းအတွင်း, ငါတို့သည် noradrenergic မူးယစ်ဆေး Reboxetine, antidopaminergic အေးဂျင့် amisulpride နှင့် placebo ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ထူထောင် erotic ဗီဒီယိုကလစ်အလုပ်ကိုအသုံးပြု။ ကျန်းမာအမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်း 19 စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ရေဘိုနှင့် amisulpride နှစ်မျိုးလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Reboxetine သည်လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်းကိုလျှော့ချပေးသည်။ အထူးသဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အော်ဂဇင်ကိုရရှိရန်နှင့်စိုက်ထူခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်စွမ်းရည်သည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့် amisulpride တို့၏ reboxetine နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
erotic နှိုးဆွနေစဉ်အတွင်း fMRI ယခင်လေ့လာမှုများအစီရင်ခံထားပြီးကြောင်း ဦး နှောက်ဒေသများ၏သိသာထင်ရှားသော activation ပုံတူကူးယူRedoute et al ။ , 2000; ပန်းခြံ et al ။ , 2001; Arnow et al ။ , 2002; Walter et al ။ , 2008; Metzger et al ။ , 2010; Abler et al ။ , 2011; Georgiadis နှင့် Kringelbach, 2012), အရှင်အလုပ်လုပ်တဲ့စိန်ခေါ်မှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရထောက်ပံ့။ သိသာထင်ရှားသည့်ကုသမှုဖြင့်အခြေအနေများအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့် amisulpride တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မှန်ကန်သော caudate နျူကလိယ၏တက်ကြွမှုကိုလျော့နည်းစေသည့်အရ reboxetine (SNRI) နှင့်သီးသန့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင် caudate နျူကလိယ၏ ventral အစိတ်အပိုင်းအတွက် activation အပြောင်းအလဲများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၏ပုဂ္ဂလဒိratings္ ratings အတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ မပြောင်းလဲသောအပြုအမူဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်အတူ, PLA မှ AMS ဆွေမျိုး erotic ဆွအပေါ်သို့အာရုံကြော activation အပေါ်မျှသိသာကုသမှုသက်ရောက်မှုများလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများထုတ်လုပ်ရာတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္ကိုဖော်ပြသည်Abler et al ။ , 2011; Oei et al ။ , 2012) နှင့် antidopaminergic ဂုဏ်သတ္တိများ (Castelli et al ။ , 2001; Assem-Hilger နှင့် Kasper၊) amisulpride ၏, ပိုမိုသိသာသက်ရောက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိထက်မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသည် (ပုံ 2B) ။ ပိုမိုဆိုးရွားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်းသည်ဆေးစွဲခြင်းအပေါ်မှီခိုသောဆေးဝါး၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်။Andrade၊ ၂၀၁၃) ။ Amisulpride ၏ antipsychotic အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို 400 မှ 600mg /dအထိမြင့်မားသောဆေးများသောက်သုံးခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော D ရရှိနိုင်ပါသည်။2 receptor ထေို ()Perrault et al ။ , 1997) ။ သို့သော်အစီရင်ခံစာများအနေဖြင့် (ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသည့်အတိုင်း) ၅၀ မှ ၂၀၀ မီဂရမ် /dဆေးပမာဏနိမ့်သည့်ဆေးများသောက်ဆေး၏ထိရောက်မှုကို presynaptic dopamine autoreceptors များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်အကြံပြုထားသည်။Perrault et al ။ , 1997; Smeraldi၊ ၁၉၉၈; Montgomery၊ ၂၀၀၂) ။ ဤအနူးညံ့သော prodopaminergic ဆိုးကျိုးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရှင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့်လက်ရှိ amisulpride သောက်သုံးမှုသည် amisulpride နှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောပလာစမာ prolactin အဆင့်များလုံလောက်စွာမတိုးနိုင်ပါ။Hartter et al ။ , 2003) နှင့်အရံမဟုတ်ဘဲဗဟို dopaminergic လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့သက်ရောက်မှုအားထုတ်လိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် noradrenergic agent reboxetine သည်စိတ်ကျရောဂါဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွှယ်သောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်စွာအစီရင်ခံတင်ပြသောကြောင့်ဖြစ်သည် (Clayton နှင့် Zajecka, 2003a; Baldwin et al ။ , 2006), ငါတို့မဟုတ်ဘဲလေ့လာတွေ့ရှိထက်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးလျော့နည်းထိခိုက်သက်ရောက်မှုများမျှော်လင့်ထား။ သို့သော်ကြာရှည်အော်ဂဇင်၏ယခင်အစီရင်ခံစာများ (Haberfellner၊ ၂၀၀၂), Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်သုတ်ရည်လွှတ်မှု (O'Flynn et al ။ , 2000; Sivrioglu et al ။ , 2007) အဖြစ် anorgasmia (Langworth et al ။ , 2006) reboxetine အောက်မှာလက်ရှိရလဒ်များနှင့်အညီဖြစ်ကြသည်။ NA-curve ဆက်နွယ်မှုကိုလက်ခံခြင်းသည်မျှတပြီးကျန်းမာသည့် NA စနစ်၏အကောင်းဆုံးထက်ကျော်လွန်သော noradrenergic neurotransmission တိုးလာခြင်းသည်လိင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေနိုင်သည်၊Graf ၏ et al ။ , 2011).
လုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သိသာထင်ရှားသည့်ကုသမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို SNRI reboxetine အောက်ရှိတက်ကြွအာရုံကြောများနှင့်အတူလက်ျာ caudate နျူကလိယနှင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ အဆိုပါ caudate နျူကလိယ activation လူမှုရေးအပြုအမူ, ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့၏ရှုထောင့်များတွင်တသမတ်တည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်Redoute et al ။ , 2000; Bartels နှင့် Zeki, 2004; Aron et al ။ , 2005; Walter et al ။ , 2008) ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု၌ရှိသကဲ့သို့ညာဘက်တစ် ဦး lateral နှင့်အတူ (Aron et al ။ , 2005; Walter et al ။ , 2008) ။ ထို့အပွငျယခင်လေ့လာမှုများတွင်, တိုးမြှင့် penile turgidity နှင့်စိုက်ထူ၏အစီအမံ caudate နျူကလိယ၏မြင့်မားသောအာရုံကြော activation နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (ပန်းခြံ et al ။ , 2001; Arnow et al ။ , 2002) ။ erotic ဆွနေစဉ်, caudate နျူကလိယ activation ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားအပြုအမူများနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Arnow et al ။ , 2002) ။ အထူးသဖြင့်နျူကလိယနျူကူဘင်ပါဝင်သောလှုပ်ရှားမှုများသည်အလွန်ပြင်းထန်သောနေရာများအတွင်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သော်လည်းမက်လုံးများမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်၊Miller က et al ။ , 2014) အ caudate တလျှောက် differential ကို activation နှင့်အတူစိတ်ခွန်အားနိုးအပြောင်းအလဲနဲ့ vs ဆုလာဘ်၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ပေါင်းသင်းနိုင်ဘူး။ Dorsal Striatal Activation သည်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်တိုးတက်ခဲ့ပြီးနျူကလိယ၏ပိုမို ventral အစိတ်အပိုင်းများကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်းသည်ဆုလာဘ်နှင့်တိုးပွားလာသည်။ ထို့ကြောင့်, reboxetine အောက်မှာလျော့နည်းသွား caudate activation ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလျော့နည်းသွား activation ၏ဆက်စပ်မှုခေါ်ဆောင်သွားဆွ၏အဓိကစိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဒီအနက်နှင့်အညီ, အလားတူဆေးညွှန်းများနှင့်ကျန်းမာရေးဘာသာရပ်များအတွက် reboxetine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုဆုအစားအစာလှုံ့ဆော်မှု၏အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်သို့ထိရောက်မှု ventral striatal လှုပ်ရှားမှု (McCabe et al ။ , 2010).
လူသားများတွင် striatum ကို noradrenergic neuron များကသိသိသာသာမထိုးဖောက်နိုင်သည့်အတွက် (Wallman et al ။ , 2011), SNRI အောက်မှာ caudate အတွင်း attenuated အာရုံကြော activation အများဆုံးဖွယ်ရှိတိုးလာ NA အဆင့်ဆင့်၏သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်။ dopamine နှင့် NA စနစ်အကြားအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများ (Guiard et al ။ , 2008) နှင့် dopaminergic အာရုံခံအပေါ် NA ၏ inhibitory အရေးယူမှု (အယ်လ် Mansari et al ။ , 2010) ဒီနေရာမှာရှင်းပြချက်ကိုပူဇော်လိမ့်မည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ, အမျိုးသမီးများရာသီစက်ဝန်းနှင့်ဆက်စပ်သောဟော်မုန်းကွဲပြားမှုကြောင့်ဘက်လိုက်မှုရလဒ်များကိုရှောင်ရှားရန်အထီးဘာသာရပ်များသာစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည် (ဥပမာ, Abler, et al ။ , 2013) ။ ထို့ကြောင့်, လက်ရှိရလဒ်များကိုအလွယ်တကူဟော်မုန်းပြည်နယ်များအတွက်အတိအလင်းထိန်းချုပ်နောက်ထပ်လေ့လာမှုလိုအပ်မယ်လို့အမျိုးသမီးနမူနာ, သို့လွှဲပြောင်းမရနိုင်ပါ။ noradrenergic agent ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့် reboxetine အောက်တွင်အိပ်ချိန်လျော့နည်းခြင်းသည်အလုပ်လုပ်သောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအောက်ရှိအချက်အလက်ရယူခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် fMRI စစ်ဆေးပြီးနောက်ချက်ချင်းရရှိသော SSS မှရလဒ်များသည်အိပ်ငိုက်မှုသို့မဟုတ်သက်သာစေသောဆေးများသည်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်လိမ့်မည်ဟုမဖော်ပြခဲ့ပါ။ ကျောင်းအပ်နှံမှုအပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအောက်၌ရှိပြီးသား MGH-SFQ ပေါင်းလဒ်ရမှတ်အနည်းငယ်ဖြစ်သော်လည်းအနည်းငယ်သာတိုးတက်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊ ရလဒ်များအရဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအောက်၌ပင်မျှော်လင့်ထားသည့်သက်ရောက်မှုအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့သောမျှော်လင့်ချက်များသည် plumbo အောက်ရှိ MGH-SFQ အမှတ်ပေးမှုကိုလျော့နည်းသွားစေကာမူ verum နှင့် placebo အကြားကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းများလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ MGH-SFQ အမှတ်ပေးမှုအနည်းငယ်တိုးတက်မှုသည်ဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆန့်ကျင်သည်။
မေးခွန်းလွှာအချက်အလက်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ပုဂ္ဂလဒိexperiences္ဌာန်အတွေ့အကြုံများကိုကောင်းစွာသိရှိနိုင်သော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု၏ရှုထောင့်များ၊ ဥပမာ - penile turgidity စသည်တို့ကိုထပ်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အလားတူစွာ၊ ကျန်းမာသောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်လေ့လာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောနှုတ်အစီရင်ခံစာများကိုဖြည့်စွက်ရန်အရက်ပမာဏကိုတိုင်းတာရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသောတိုင်းတာမှုသည်အသုံးဝင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ထပ်မံ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် amisulpride ၏အတော်လေးနိမ့်ကျသောပမာဏအောက်တွင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကိုရှင်းပြနိုင်သောဆေးထိုးမှီခိုသည့်သက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းရန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်အတူတူပင်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
နှစ် ဦး မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled, crossover ဒီဇိုင်းအတွင်းကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုအတွက်အောက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုအတွက်မဟုတ်ရင်နာမကျန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများမှလွတ်လပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသက်ရောက်မှုကိုဆနျးစစျဖို့ noradrenergic ဆေးဝါး reboxetine နှင့် dopamine ရန်ငြိုး amisulpride အောက်မှာကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် erotic လှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး ဒီဆေးတွေ။ ပမာဏနည်းသော amisulpride သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုမပြောင်းလဲစေဘဲအာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုထိခိုက်မှုမရှိသေးပါ။ ၎င်းသည်ဒီဆေး၏နိမ့်ကျသောဆေးပမာဏအောက်တွင်ဖြစ်နိုင်သော prodopaminergic သက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါ noradrenergic အေးဂျင့် reboxetine အဘို့, ငါတို့ noradrenergic အေးဂျင့်အောက်မှာခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့၏လျော့နည်းသွားစိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ caudate နျူကလိယအတွင်း attenuated အာရုံကြော activation နှင့်အတူကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက်ဘာသာရပ်ချို့ယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလေ့လာသည်။
ဖော်ပြထားသောအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်ရန်ပုံငွေမရှိခြင်းကိုစာရေးသူအားလုံးကကြေငြာကြသည်။ C. Metzger နှင့်အမ် Walter SFB-779 ကထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
မူးယစ်ဆေးသွေးရည်ကြည်တိုင်းတာမှုအတွက်ပါမောက္ခဒေါက်တာ C. Hiemke နှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန၊ Mainz တက္ကသိုလ် (ဂျာမနီ) ရှိသူ၏ ၀ န်ထမ်းများအားကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Abler B, Seeringer A, Hartmann A, Grön G, Metzger ကို C, Walter M, Stingl J. (2011) ။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ - subchronic paroxetine နှင့် bupropion အောက်ရှိကျန်းမာသောအမျိုးသားများအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာမှထိန်းချုပ်ထားသော FMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology 36: 1837-1847 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Abler B, Grön G, Hartmann A, Metzger C, Walter M. (2012) ။ frontostriatal အပြန်အလှန်၏မော်ဂျူ serotonergic မူးယစ်ဆေးဝါးများအောက်မှာလျှော့မူလတန်းဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အတူ aligns ။ J ကို Neurosci 32: 1329-1335 ။ [PubMed]
Abler B, Kumpfmüller: D, Grön, G, Walter M, Stingl J, Seeringer A. (2013) ။ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အောက်မှာခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ PLoS တစ်ခုမှာ 8: e54447 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Andrade C. (2013) ။ သွေးရည်ကြည် prolactin အတွက် Low- ထိုး amisulpride နှင့်မြင့်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 74: e558-560 ။ [PubMed]
Arnow BA, Desmond JE, Banner LL, Glover GH, Solomon A, Polan ML, Lue TF, Atlas SW ။ (2002) ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲယောက်ျားအတွက် ဦး နှောက်ကို activation နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွ။ ဦး နှောက် 125: 1014-1023 ။ [PubMed]
Aron A၊ Fisher H၊ Mashek DJ၊ Strong G၊ Li H, Brown LL ။ (2005) ။ အစောပိုင်းအဆင့်ပြင်းထန်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဆုလာဘ်၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစနစ်များ။ J ကို Neurophysiol 94: 327-337 ။ [PubMed]
Assem-Hilger အီး, Kasper အက်စ် (2005) ။ Psychopharmaka und sexuelle Dysfunktion ။ J ကို Neurol, Neurochi စိတ်ရောဂါ 6: 30-36 ။
Baldwin: D, Mayers အေ (2003) ။ Antidipressant နှင့် antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လိင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။ Adv စိတ်ရောဂါကုသမှု0င်: 202-210 ။
Baldwin: D, Bridgman K ကို, Buis C. (2006) ။ Reboxetine သို့မဟုတ် paroxetine နှင့်အတူအဓိကစိတ်ကျရောဂါကို double-blind ကုသမှုပြုစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်။ J ကို Psychopharmacol 20: 91-96 ။ [PubMed]
Baldwin DS, Palazzo MC, Masdrakis VG ။ (2013) ။ ကုသမှု - ပေါ်ထွက်လာသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်စိတ်ကျရောဂါကုသမှုအသစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အလားအလာရှိသောပစ်မှတ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ စိတ်ကျရောဂါ Res ကုသမှု 2013: 256841 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bartels တစ် ဦး က, Zeki အက်စ် (2004) ။ မိခင်နှင့်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ Neuroimage 21: 1155-1166 ။ [PubMed]
Castelli အမတ် Mocci I၊ Sanna လေး၊ Gessa GL၊ Pani L. (၂၀၀၁) ။ (-) S amisulpride သည်ပုံတူမျိုးပွား Dopamine D (2001) နှင့် D (3) receptors များနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသည်။ EUR J ကို Pharmacol 2: 432-143 ။ [PubMed]
Clayton AH, Zajecka ဂျေ (၂၀၀၃) အဓိကစိတ်ကျရောဂါကုသမှုအတွက်ကုသမှုပြုနေစဉ် noradrenaline ပြန်လည်အသုံးပြုမှုကိုတားဆီးသော reboxetine နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ int Clin Psychopharmacol 2003: 18-151 ။ [PubMed]
Clayton AH၊ Zajecka J၊ ဖာဂူဆန် JM၊ Filipiak-Reisner JK၊ Brown MT, Schwartz GE ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါကုသမှုစဉ်အတွင်းရွေးချယ်ထားသော noradrenaline ပြန်လည်သောက်သုံးမှုတားစီးဘော့ (reboxetine) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (2003b) ။ int Clin Psychopharmacol 18: 151-156 ။ [PubMed]
Coleman CC, King BR, Bolden-Watson C, Book MJ, Segraves RT, Richard N, Ascher J, Batey S, Jamerson B, Metz A. (2001) ။ bupropion ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့် fluoxetine ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရလဒ်များအရအိပ်မပျော်သည့်ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ချက်။ Clin Ther 23: 1040-1058 ။ [PubMed]
အယ်လ် Mansari M၊ Guiard BP၊ Chernoloz အို၊ Ghanbari R၊ Katz N, Blier P. (2010) ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါကုသမှုအတွက် norepinephrine-dopamine interaction က၏သက်ဆိုင်ရာ။ CNS Neurosci Ther 16: e1-17 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Georgiadis JR, Kringelbach ML ။ (2012) ။ လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာ - လိင်မှုကိုအခြားအပျော်အပါးများနှင့်ဆက်စပ်စေသော ဦး နှောက်ပုံရိပ်အထောက်အထား။ Prog Neurobiol 98: 49-81 ။ [PubMed]
Graf H ကို, Abler B, Freudenmann R ကို, Beschoner P ကို, Schaeffeler အီး, Spitzer M, Schwab M, Grön G. အ (2011) ။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် atomoxetine နေဖြင့် modulated အမှားစောင့်ကြည့်ရေး၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 69: 890-897 ။ [PubMed]
Graf H ကို, Abler B, Hartmann တစ် ဦး, Metzger CD ကို, Walter M. (2013) ။ ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များရှိစိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်သောပစ္စည်းများအောက်တွင်အာရုံပြုကွန်ယက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်း။ Int J ကို Neuropsychopharmacol 16: 1219-1230 ။ [PubMed]
Graf H ကို, Walter M, Metzger CD ကို, Abler ခ (2014) ။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: neuroimaging မှအမြင်များ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav 121: 138-145 ။ [PubMed]
Guiard ကို BP, El Mansari M က, Blier P. (2008) ။ ကြွက် ventral tegmental ,ရိယာ၌, dopaminergic နှင့် noradrenergic စနစ်များအကြားအပြန်အလှန်စကားပြော, locus ceruleus နှင့် dorsal hippocampus ။ Mol Pharmacol 74: 1463-1475 ။ [PubMed]
Haberfellner EM ။ (2002) ။ reboxetine ကြောင့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Pharmacopsychiatry 35: 77-78 ။ [PubMed]
Haddad pm တွင်, Sharma က SG ။ (2007) ။ atypical antipsychotics differential ကိုအန္တရာယ်နှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး 21: 911-936 ။ [PubMed]
Hajos M, Fleishaker JC, Filipiak-Reisner JK, Brown MT, Wong EH ။ (2004) ။ pharmacological နှင့်လက်တွေ့ပရိုဖိုင်းကို: ရွေးချယ် norepinephrine inhibitor စိတျဓာတု reboxetine ပြန်လည်သိမ်းဆည်း။ CNS မူးယစ်ဆေးဗြာ 10: 23-44 ။ [PubMed]
Hartter S, Huwel S, Lohmann T, Abou El Ela A, Langguth P, Hiemke C, Galla HJ ။ (2003) ။ benzamide antipsychotic amisulpride သည် ဦး နှောက်ထဲသို့မည်သို့ရောက်ရှိသနည်း။ amisulpride ကို clozapine နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် in vitro ချဉ်းကပ်နည်း။ Neuropsychopharmacology 28: 1916-1922 ။ [PubMed]
Hautzinger M က, Bailer အမ် (1993) ။ Allgemeine Depressionsskala (ADS) ။ Landsberg, ဂျာမနီ။
Hodes အီး, Zarcone V ကို, Smythe H ကို, Phillips က R ကို, Dement ဒဗလျူ (1973) ။ အိပ်ငိုက်၏အရေအတွက်: အသစ်တခုချဉ်းကပ်မှု။ Psychophysiology 10: 431-436 ။ [PubMed]
Labbate LA က, Lare SB ။ (2001) ။ အထီးစိတ်ရောဂါပြင်ပလူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - မက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာမေးခွန်းလွှာ၏တရားဝင်မှု။ Psychother Psychosom 70: 221-225 ။ [PubMed]
Langworth S က, Bodlund အို, Agren အိပ်ချ် (2006) ။ citalopram: reboxetine ၏ထိရောက်မှုနှင့်သည်းခံနိုင်မှုကိုအဓိကစိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသောလူနာများအတွက် double-blind လေ့လာမှုပြုလုပ်သည်။ J ကို Clin Psychopharmacol 26: 121-127 ။ [PubMed]
La Torre A၊ Conca A၊ Duffy D၊ Giupponi G၊ Pompili M, Grozinger M. (2013) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - ဝေဖန်သုံးသပ်မှုအပိုင်း ၂ - antipsychotics ။ Pharmacopsychiatry 46: 201-208 ။ [PubMed]
Lingjaerde O, Ahlors UG, Bech P, Dencker SJ, Elgen K. (1987) ။ UKU ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများနှင့်စိတ်ကြွဆေးဝါးများအတွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဘက်စုံလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အသစ်တစ်ခု။ Acta စိတ်ရောဂါ Scand ပျော့ပျောင်း 334: 1-100 ။ [PubMed]
McCabe ကို C, Mishor Z ကို, Cowen PJ, Harmer CJ ။ (2010) ။ ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor ကုသမှုစဉ်အတွင်း aversive နှင့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှု၏လျော့နည်းသွားအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 67: 439-445 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Metzger CD, Eckert U, Steiner J, Sartorius A, Buchmann JE, Stadler J, Tempelmann C, Speck O, Bogerts B, Abler B, Walter M. (2010) ။ High Field FMRI သည်သီးခြားသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို thalalmortal ပေါင်းစည်းခြင်းအား mediodorsal နှင့် intralaminar thalamic nuclei တွင်ပေါင်းစပ်ဖော်ပြသည်။ Neuroanat 1 တပ် ဦး: 138 1-17 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Miller EM, Shankar MU, Knutson B, McClure SM ။ (2014) ။ လူ့သန္ဓေသားလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဆုလာဘ်မှလှုံ့ဆော်မှုကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း။ J ကို Cogn Neurosci 26: 1075-1078 ။ [PubMed]
Montgomery SA ။ (2002) ။ Dopaminergic လိုငွေပြမှုနှင့်စိတ်အခြေအနေများကိုကုသရာတွင် amisulpride ၏အခန်းကဏ္။ ။ int Clin Psychopharmacol 17: S9-15; ဆွေးနွေးမှု S16-17 ။ [PubMed]
Oei NY, Rombouts SA, Soeter RP, van Gerven JM, S. နှစ် ဦး စလုံး (၂၀၁၂) ။ Dopamine သည်လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုမသိစိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်စနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြုပြင်သည်။ Neuropsychopharmacology 2012: 37-1729 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
O'Flynn R ကို, မိုက်ကယ်အေ (2000) ။ Reboxetine- သွေးဆောင်အလိုအလျောက်သုတ်ရည်လွှတ်မှု။ Br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 177: 567-568 ။ [PubMed]
Park K၊ Seo JJ၊ ကန်ဟောင်ကောင်၊ Ryu SB၊ ကင်မ်ဂျေဂျေ၊ Jeong GW (2001) ။ penile စိုက်ထူခြင်း၏ ဦး နှောက်စင်တာများအကဲဖြတ်ဘို့အအသွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်ကိုမှီခို (BOLD) အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI ၏အလားအလာအသစ်။ Int J ကို Impot Res 13: 73-81 ။ [PubMed]
ပန်းခြံ YW, ကင်မ် Y ကို, Lee က JH ။ (2012) ။ Antipsychotic သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှု။ ကမ္ဘာ့ဖလား J Mens ကျန်းမာရေး 30: 153-159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Perrault, G, Depoortere R, Morel E, Sanger DJ သမား, Scatton ခ (၁၉၉၇) ။ amisulpride ၏ psychopharmacological ပရိုဖိုင်းကို: presynaptic D1997 / D2 dopamine အဲဒီ receptor ရန်လှုပ်ရှားမှုနှင့် limbic ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူ antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါး။ J ကို Pharmacol Exp Ther 3: 280-73 ။ [PubMed]
Pessiglione M, Seymour B, Flandin, G, Dolan RJ, Frith CD တို့။ (2006) ။ Dopamine-မှီခိုခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများသည်လူသားတို့အတွက်ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုအထောက်အကူပြုသည်။ သဘာဝ 442: 1042-1045 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Radloff အယ်လ် (1977) ။ CES-D စကေး - ပြည်သူလူထုအတွက်သုတေသနပြုရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်စိတ်ကျရောဂါစကေး။ လျှောက်လွှာ Psychol အတိုင်းအတာ 1: 385-401 ။
Redoute J, Stoleru S, Gregoire MC, Costes N, Cinotti L, Lavenne F, Le Bars D, Forest MG, Pujol JF ။ (2000) ။ လူ့ယောက်ျားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Hum ဦး နှောက် Mapp 11: 162-177 ။ [PubMed]
Sivrioglu EY, Topaloglu VC, Sarandol A, Akkaya C, Eker SS, Kirli S. (2007) ။ Reboxetine သည်ချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့် micturition စဉ်အတွင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်သုတ်ရည်လွှတ်မှုကိုသွေးဆောင်ခဲ့သည်။ Prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 31: 548-550 ။ [PubMed]
Smeraldi အီး (1998) ။ dysthymia သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလွှတ်အတွက်အဓိကစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် Amisulpride နှိုင်းယှဉ် fluoxetine: တစ် ဦး ကို double- မျက်စိကန်း, နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ J ကို Disord 48 ထိခိုက်: 47-56 ။ [PubMed]
Tanum အယ်လ် (2000) ။ Reboxetine: အဓိကစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပရိုဖိုင်းကို။ Acta စိတ်ရောဂါ Scand ပျော့ပျောင်း 402: 37-40 ။ [PubMed]
တေလာ MJ, Rudkin L ကို, Hawton K. (2005) ။ စိတ်ကျရောဂါကုသမှု - သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်မဟာဗျူဟာများ - ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ J ကို Disord 88 ထိခိုက်: 241-254 ။ [PubMed]
Taylor MJ၊ Rudkin L၊ Bullemor-Day P၊ Lubin J၊ Chukwujekwu C၊ Hawton K. (2013) ။ စိတ်ကျရောဂါဆေးသောက်ခြင်းဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်မဟာဗျူဟာများ။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗြာ 5: CD003382 ။ [PubMed]
Wallman MJ, Gagnon: D, မိဘအမ် (2011) ။ လူ့ Basal ganglia ၏ Serotonin innervation ။ Eur J ကို Neurosci 33: 1519-1532 ။ [PubMed]
Walter M, Stadler J၊ Tempelmann C၊ Speck O, Northoff G. (2008) ။ 7-21: 103 T. MAGMA 111 မှာအမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွစဉ်အတွင်း subcortical ဒေသများ၏မြင့်မားသော resolution ကို fMRI ။ [PubMed]
ဝီစကီအီး, တေလာ ((2013) ။ noradrenergic စိတ်ကျရောဂါ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏တစ် ဦး ကပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကို Psychopharmacol 27: 732-739 ။ [PubMed]